जनकपुर-जयनगर रेल चलाउन आवश्यक तयारी पूरा, अब कहिलेदेखि संचालन हुन्छ ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > जनकपुर-जयनगर रेल चलाउन आवश्यक तयारी पूरा, अब कहिलेदेखि संचालन हुन्छ ?
पोष्ट गरिएको साउन. ०६, २०७८ मा ११:३० बिहान साउन ६, २०७८
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समय पहिले रेलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् । अध्यादेश आएको ६० दिनभित्र संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थानुसार अहिले त्यो पेश भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व पनि संसद्मा रेलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्म